Gadzira yako ngowani yekuChina neyehunyanzvi hwevana | Mhizha On
Unyanzvi hwevana: Gadzira yako yako Chinese ngowani
Une mutambo wekupfeka pamberi? Ungade here kupfeka kumabvazuva? Nenhanho idzi dziri nyore iwe unogona kudzidza kuvaka yako chinese ngowani. Iwe uchaona kuti zviri nyore sei!
Chinhu chakanaka pamusoro peichi chigadzirwa ndechekuti ine mari chaizvo uye zvakare inokurumidza kwazvo kuita, saka mune imwe nyaya yemaminetsi mashoma tichava neheti yedu yeChinese yakagadzirira macarnival kana chero mumwe mutambo umo isu tichaenda kupfeka nechimwe chinhu chekumabvazuva.
Kuti tisapindire, tichaona nhanho nhanho maitiro ekugadzira ngowani yeChinese:
1 Zvishandiso zvekugadzira ngowani yeChinese
2 Nhanho nhanho kugadzira ngowani yeChinese
Zvishandiso zvekugadzira ngowani yeChinese
Kugadzira ngowani yeChinese isu tinoda zvinotevera zvinhu:
Kana iwe usingakwanise kuwana chero cheizvi zvinhu, unogona kushandisa zvimwe zvakaenzana zvakaenzana nechinangwa chehunyanzvi. Iyo kadhibhodhi haidi kuomeswa uye kana iwe usina mvura yesilicone, unogona kushandisa chero imwe yekunamatira.
DIY feather ngowani
Nhanho nhanho kugadzira ngowani yeChinese
Kutanga, nerubatsiro rwemunhu mukuru kuti atibatsire kucheka denderedzwa rinosvika 60 cm dhayamita pane kadhibhodi.
Ipapo isu tinodhirowa mutsetse kubva kumucheto wedenderedzwa kusvika pakati, uchitevera radius yayo, saka isu tinoshandisa mutongi kubatsira.
Pamutsara uyu tichacheka nekasi uye divi rega rega rakatemwa rinozogadziriswa neiclic silicone. Izvo zvaunoda kuti uite kuti ngowani ihurefu koni ine kumucheto kwemativi akagurwa.
Ipapo isu tichatora satin ribhoni uye naro isu tichagadzira kuruka uye kunamatira pakati peheti, uye kana tichida tinogona kuwedzera uta pakupera kwekuruka, seimwezve yekushongedza chishongedzo. Uye ndizvozvo! Unotova nechokwadi ngowani yekumabvazuva!
Iye zvino unogona kuchishongedza sezvo iwe uchida kuchisiya chakasarudzika zvachose uye nekuda kwako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts » Unyanzvi hwevana: Gadzira yako yako Chinese ngowani
Eva rubber butterflies
Maitiro ekugadzira maruva kubva mupepa re crepe